I-villa emangalisayo ejonge eKapa Mae Phim
Le villa enkulu yamaphupha ibekwe phezulu kweCape Mae Phim. Indlu yi-600 sqm kunye nekhitshi enkulu kunye negumbi lokuhlala kunye negumbi eliphezulu lokulala elinombono omhle wolwandle, i-balcony, igumbi lokuhlambela kunye ne-patio yangaphandle ene-jacuzzi. Ukongeza kukho amagumbi amabini aphindwe kabini, aneshawa kunye nendlu yangasese. Ukongeza koku kukho igumbi elikhulu losapho elinomnyango wabucala owahlukileyo kunye nelinye igumbi elinomnyango walo. Indlu ine-intanethi engenazingcingo.
Indlu yi-600 sqm kunye nekhitshi enkulu kunye negumbi lokuhlala kunye negumbi eliphezulu lokulala elinombono omhle wolwandle, i-balcony, igumbi lokuhlambela kunye ne-patio yangaphandle ene-jacuzzi. Ukongeza kukho amagumbi amabini aphindwe kabini, aneshawa kunye nendlu yangasese. Ukongeza koku kukho igumbi elikhulu losapho elinomnyango wabucala owahlukileyo kunye nelinye igumbi elinomnyango walo. Indlu ine-intanethi engenazingcingo.
Kwilali yaseMae Phim zininzi iindawo zokutyela ezimangalisayo. Iivenkile ezincinci zegrosari kunye nezinye iivenkile ziyafumaneka. Olunye lolona lwandle lubalaseleyo yiCoca-Cola Beach kwaye kukho ulwazi endlwini ukuba ungazifumana njani iindawo ezahlukeneyo. Ukuba ufuna ukurenta imoped nceda uthethe nabahlobo bethu abakwamkelayo.
Sinabasebenzi abavela kwi-Sun4You abadibana nazo zonke iindwendwe zethu kwaye bancede ngokungena kunye nokuphuma. Banokunceda kwaye baphendule uninzi lwemibuzo onokuba unayo. Kufuneka wenze idiphozithi ye-5.000 Bath xa ufika. Hlawula imali kubasebenzi bakwaSun4You.
Sinabasebenzi abavela kwi-Sun4You abadibana nazo zonke iindwendwe zethu kwaye bancede ngokungena kunye nokuphuma. Banokunceda kwaye baphendule uninzi lwemibuzo onokuba unayo. Kufun…